Kumele ibekwe ezithebeni zePhalamende eyama-#GuptaEmails | News24
Kumele ibekwe ezithebeni zePhalamende eyama-#GuptaEmails
Cape Town - IDemocratic Alliance ifuna i-African National Congress iqinisekise ukuthi uphenyo olumayelana neState capture lwenziwa ePhalamende, hhayi kwenye indawo, ngemuva kokuvuma ukuthi luyadingeka uphenyo kulandela i-#GuptaLeaks.
"I-DA ikholelwa ekutheni kushiyana nemibuzo ukuthi i-ANC iphakamise ukuthi kumele kuphenywe ngokuthi kukhona abathile abalawula uhulumeni wayo,” kusho okhulumela i-DA uPhumzile van Damme ngoLwesihlanu.
"Sekube namathuba amaningi okuthi i-ANC ithathe izinyathelo ngomengameli wayo ‘obanjwe ngobhongwane’ ngabathile kanye namaGupta, kepha yakhetha ukungakwenzi lokho.”
I-ANC ngoLwesihlanu ivumile ukuthi ulwazi oluvela kuma#GuptaEmails lushiya imibuzo ngesithunzi nangokwethembeka koMbuso.
OLUNYE UDABA: #GuptaEmails: Konke odinga ukukwazi ngokuputshuka kwama-email
Le nhlangano isphakamise ukuthi uhulumeni uthole iqiniso ngala ma-email, kusho okhulumela i-ANC uZizi Kodwa.
UVan Damme uthe i-ANC kumele iseseke isinqumo seqembu sokuthi kube khona ikomidi elizophenya ngalezi zinsolo.
Kula ma-email angundabamlonyeni kuvela ukuthi amaGupta awulawula kanjani uhulumeni wakuleli, izikhulu kanye nezinkampani ezingaphansi kukahulumeni ukuba kuvune wona.
Kwenye yama-email kuvela ukuthi uMengameli Jacob Zuma wafaka isicelo sokuthuthela umndeni wakhe eDubai uma esethatha umhlalaphansi.